Jesu - vanhu rubatso | Apg29
Jesu akamira rubatso rose pavanhu.
Jesu akamira rubatso rose pavanhu. Mambo Soromoni akachenjera aigona kuburikidza nokuzarurirwa ouprofita Proverbs kufanotaura zvakaitika Jesu nguvo, mazana emakore izvi zvisati zvaitika.
Jesu akava rubatso yedu
Man aisambogona kubhadhara kwavo chivi. Asi Jesu akava rubatso yedu akaripa zvizhinji vanhu chikwereti mutoro. Hazvaikwanisa ngaitorwe nesirivha kana goridhe, asi Jesu akanga mutengo kana akabhadhara nayo neropa rake rinokosha.
We mashoko orugwaro kubva Matt.27: 35
"Zvino vakati vamuroverera pamuchinjikwa, vakagovana nguo dzake vachiita zvokukanda mijenya"
Mune imwe shanduro inoti: "Varwi vairidza mijenya kuti vagovane nguo dzake," asi mumwe "zvinodhaka uswa pavo." Chiitiko hunorondedzerwawo muna Mark.15: 24 uye Luke. 23:34.
The Chiitiko nguo yaJesu vari zvafanotaurwa
Asi vaverengi zvose Bhaibheri vangasaziva kuti chiitiko zvokupfeka aJesu akataurawo muTesitamende yekare. Mambo Soromoni, uyo aiva muporofita anonyora pamusoro izvi Zvirevo. 20:16:
"Tora nguvo pake, nokuti akazviita chokumbofanobata kumunhu mumwe, uye rubatso kana ane nokuda vatorwa."
Tiine "mutorwa" zvinoreva refu mukana vahedheni, vaJudha, uye zvose marudzi, zvirokwazvo, rose wawira vanhu - zvakadai iwe neni, vakanga vakatakura mhosva chivi. In Zvir. 27:13: anoti:
"Tora nguvo pake, nokuti akazviita chokumbofanobata kumunhu mumwe, uye rubatso kana iye, wokumwe kweushe."
Heavy basa munhu akamira chokumbofanobata
Munguva yesungano yekare, uye panguva yaJesu akazorora chinhu chaizvo basa iri munhu akamira rubatso chikwereti-vakaremerwa pachavo. The rubatso anofanira kutanga kuripa chikwereti chikwereti. Asi kana chikwereti asingagoni kubhadhara aiva rubatso kuitwa kuita kudaro. Pakanga kunyange kubvumidzwa kubvumidzwa kutora nguo dzake rubatso.
Tichatarisa rumwe rugwaro sezvo muenzaniso yezvakaitika chokumbofanobata chomushumiri munhu. Zvir. 22: 26-27
"Usava mumwe wavanozvisunga noruoko, vevamire rubatso chikwereti. Asina kufanana iwe, unofanira kuti kubvisa mubhedha uri kupi, kana iwe chokuripa ne? "
Kunyange mubhedha, uko chikwereti-kuremedzwa kushandiswa hope yaiva chikwereti kodzero kutora chokumbofanobata.
Yaiva tsika muIsraeri kuti masoja vaifanira kutora pamuchinjikwa nguo. Vakatora nguo yaJesu kwete chete, asiwo pamuchinjikwa makororo nguo. Jesu 'nguo akanga yakarukwa mune chimwe uye vasina vazvo. Nei masoja regai kuibvarura, asi tikande mijenya pamusoro payo, kuti aone kuti ndiani aigona ndezvaJehovha (Jn. 19:25).
Akazadzisa uprofita zvose
Masoja aiziva kuti akanga akarembera pamuchinjikwa haana kuva kupfeka zvakawanda. Asi havana kuziva kuti nokuudzawo nguo yaJesu uye ape kure nguvo, mune zvose akasangana Pis. 22:19.
Sezvo Adhamu wokutanga vakawira muchivi uye akadzingwa paradhiso, Mwari akamupa nguvo, kuitira kuti kuvanza ake kusapfeka. Apo Adhamu wokupedzisira (Jesu) akafira zvivi zvedu uye akava chituko kwatiri, akanga undressed.